Microsoft inodzokera kuchido chekugadzira accounting account yakapihwa simba ne blockchain | Linux Vakapindwa muropa
Mazuva mashoma apfuura Microsoft yakaunzwa ku Vaka 2021 Virtual Vagadziri Musangano, iyo Azure Yakavanzika Ledger (ACL) Ruzhinji Rwekutarisa timu, sevhisi nyowani yakachengetedzeka sevhisi yekuchengetedza zvakavanzika data zvinyorwa
Bhuku rakavanzika, yakavakirwa pane blockchain modhi uye inopa yakasarudzika data kutendeka mabhenefiti. Pakati pezvimwe zvinhu zvaunogona kuchengeta muChipupuriro Ledger pane matanda ane chekuita nekutengeserana kwebhizinesi rako uye IT uye zviitiko zvekuchengetedza zviitiko. Chiziviso chinouya mushure mekunge Microsoft yazivisa mavhiki mashoma apfuura kuti inotarisira kuvhara iyo Azure Blockchain-se-se-sevhisi yekupa.
Azure Yakavanzika Ledger, seAzure Blockchain sevhisi, zvinoenderana nepfungwa yekuti blockchain ibhuku rakagoverwa. Microsoft's Azure Confidential Ledger inowedzera imwe dura rekuchengetedza uye kusagadzikana kune blockchain, sekureva kwevakuru vekambani. ACL inoshandisa zvakavanzika zveAzure komputa chikuva, zvinoreva kuti chiitiko cheACL chinomhanya pane yakavharidzirwa yakazara, yakatsaurwa Hardware enclave, sekureva kweMicrosoft.
Mune imwe nyaya iri pabhagija nyowani, Microsoft yakati:
"Chakavanzika Ledger inoshanda chete munzvimbo dzakachengeteka dzakatsigirwa nemidziyo, inocherechedzwa zvakanyanya uye yakasarudzika nguva yekumhanya iyo inochengetedza kurwisa kunogona kuitika. Zvakare, hapana munhu ari "pamusoro" webhuku racho, kunyangwe Microsoft. Nekutisarudzira kubva pamhinduro, Chakavanzika Ledger inoshanda pane minimalist trust hwaro (TCB) iyo inodzivirira kupinda kune Ledger vanogadzira sevhisi, data centre mahunyanzvi uye gore maneja.
ACL yakavakirwa paConfidential Consortium Framework (CCF), yakaburitswa nevakuru veMicrosoft pachena muna2017. Panguva iyoyo, vakuru vakati Coco Framework (ipfupi "zvakavanzika mubatanidzwa") yaifanirwa kushanda nechero ledger protocol uye yakamhanya pane chero sisitimu yekushandisa uye hypervisor inotsigira inotsigirwa Inovimbika Ekuuraya Nzvimbo (TEE) kana nzvimbo yakachengeteka ye processor. Chinangwa chaCoco chaive chekufambisa uye nekukasira kubvumidzwa kwe blockchain tekinoroji pakati pemabhizinesi
Iyo sisitimu yakagadzirirwa kushandiswa munzvimbo uye / kana mugore revatengesi vakasiyana, vakuru vekambani vakadaro.
Chikwata cheMicrosoft chakataura kuti ACL inoshanda nemazvo kana vashandisi vachida nzira yekuongorora yakanyanya "Yakavanzika Ledger ndeyemashandisirwo emakesi apo akakosha metadata marekodhi haafanire kuchinjwa, kunyangwe mukuenderera kwekuchengetedza uye kutevedzera zvinangwa," chinyorwa che software hofori chakaverenga.
Vakakurudzira kuti hutano, mari uye chitoro, ruzivo rwetekinoroji, kuongorora kwekutengesa, uye chero bhizinesi apo zvibvumirano nemabasa zvinoda kutaurirana zvakachengeteka vese vanogona kunge vakanakira ACL.
Semuenzaniso: zvinyorwa zvine chekuita nekutengeserana kwebhizinesi (semuenzaniso, kuwedzerwa kwemari kana shanduko kumagwaro epachivande) anovimbwa nenhumbi anovandudza (semuenzaniso, base application kana zvibvumirano); shanduko yekutonga neyekutonga (semuenzaniso, kupihwa mvumo yekuwana); uye IT uye zviitiko zvekuchengetedza zvekuchengetedza.
When akashamisika kana Azure Yakavanzika Ledger inofanirwa kutarisirwa kutsiva Azure Blockchain seSevhisi, Mhinduro yeMicrosoft yakanga isina kunanga ipapo ipapo.
Pane kudaro, mutauriri akati:
“Tiri kukumbira vatengi veAzure Blockchain Service kuti vasimudzire mhinduro yeConsenSys Blockchain Quorum. Kuchinja kuri kuita indasitiri kwakachinja, takatora danho rekubva pane chinogadzirwa nechinangwa chekugadzirisa zvinhu toenda kugadziridzo inowirirana newawakaroorana naye. ” Asi mhinduro yakapusa yakauya gare gare, apo mutauriri aive nemutsa zvakakwana kuti atsanangure mamiriro eACL:
"Azure Confidential Ledger haisi kutsiva Azure Blockchain sevhisi, asi ndeimwe bhuku rakagoverwa rinogona kushandiswa nevatengi vanoda kubatsirwa nechengetedzo yepamusoro yakapihwa kwavari. "NeAzure Yakavanzika Ledger, vatengi vanogona kushandisa zvakavanzika zveAzure kushandisa simba rezvivakwa zvakachengetedzeka pavanomisa blockchain network."
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Microsoft inodzokera kuchido chekugadzira accounting account yakapihwa simba ne blockchain